New mobile app Discounts! Buy 1 Get 1 FREE andalot more!
10% Off On Food Bill အသေးစိတ်
အစားအသောက် စားမယ်ဆို နှစ်ခါညှိစရာမလိုတဲ့ foodie ကိုခေါ်ပြီး Mr.Chef မှာ B&F Clubcard နဲ့ 10% off ယူပြီး စားကောင်းသောက်ကောင်းတွေ သွားကြိတ်ရအောင်…
Mr.Chef လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ တော်တော်များများတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ် …ပရိုမိုးရှင်းကလည်း ဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာရမှာဆိုတော့ နီးစပ်တဲ့ နေရာမှာ ကြိုက်တဲ့ အချိန်ဒိုးလို့ရတယ်…
အခုလိုမျိုး ရာသီဉတုကလည်း အေးအေးလေး ဆိုတော့က ပူပူနွေးနွေးအစားအသောက်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်နေမှုကြီးကတော့ ပြောစရာမလိုအောင်ပဲ… အတွဲပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ သူငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပုံမှန် Date တဲ့အခါမျိုးဆိုလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အစားအသောက်တွေရော … နေ့လည်စာလိုမျိုး Set ပုံစံအနေနဲ့ စားချင်တဲ့သူတွေရော ဘယ်အချိန်သွားသွားအဆင်ပြေတယ်…
အခုလို ရာသီဉတုကလည်းအေးနေတုန်း လိုက်ဖက်မယ့် အစားအသောက်က Hot Pot ... Single Set / Couple Set/ Family Set တွေရှိတာဆိုတော့ လူအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကြိုက်တာ မှာလို့ရတာပေါ့… ပုံမှန် Hot Pot Buffet ဆို တစ်သောင်းခွဲ နီးပါးပေးနေရတဲ့ အချိန်မှာ အခုလို Hot Pot ကတော့ ပိုတန်တယ်လို့ထင်တယ်… ပြီးတော့ အသားတို့ အသီးအရွက်တွေအပြင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Topping ကိုလည်း ထပ်ရွေးပြီးထည့်လို့လည်း ရသေးတယ်…
ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုင်အပြင်အဆင်တွေကမိုက်တယ်… ပေးရတဲ့ ဈေးထက်ပိုတန်တဲ့ အစားအသောက်ကောင်းတွေရှိတာမို့ Mr. Chef ကို တစ်ခေါက်လောက်တော့ ဖြစ်အောင်သွားစေချင်တယ်…
B&F Clubcard နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဆိုတော့ B&F Clubcard နဲ့ သွားမယ်ဆိုရင် Food Bill 10% Off အတွက် ရအုန်းမှာပါ… ပရိုမိုးရှင်းရဖို့က ထွေထွေထူးထူးသိပ်လုပ်စရာမလိုဘူး… ငွေရှင်းတဲ့ အချိန်မှာ Card ကိုပြပေးရုံပါပဲ…
မှတ်ချက် - ပရိုမိုးရှင်းများကိုတော့ ရောနှော အသုံးပြုလို့မရပါဘူး…
[email protected]­­­­gonCenter2 - Level-4, DagonCenter 2, Sanchaung Township
[email protected] - No.29/98, Corner of Ma Hla Kone & Kyauk Myaung Street, Tamwe Township
[email protected]' - No.222, 1st Floor, Sule Pagoda Road, Upstairs of Kone Htet Chicken Rice Shop, Kyauktada Township
[email protected] - 4th floor, Gamonepwint Shopping Center, Hledan, Insein Road, Kamayut Township
[email protected] - No.225, Pinlon Main Road, 30th Quarter, North Dagon Township. (Near Sittaung Citymart)
[email protected] ဓမ္မစေတီ (Market Palace) Coming Soon
B&F Clubcard အကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ဖုန်းနံပါတ် 099 69910115, 099 69910128 ကိုရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်…
Promotions Period - 01.Feb .2020 to 01. Aug .2020
- ပရိုမိုးရှင်းများကို ရောနှော အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ